GUDOOMIYAHA UDUB – USA OO KA JAWAABAY EEDAYMIHII LAGU SOO OOGAY | Toggaherer's Weblog
KHASNAJIGIIGUUD EE BAANKA SAYLAC OO SAQDII DHEXE BAXSAD KU GALAY JIBUUTI
NINKII GAADHIGA KU WEERARAY BOQORADA HOLLAND OO SAAKA GEERIYOODAY
GUDOOMIYAHA UDUB – USA OO KA JAWAABAY EEDAYMIHII LAGU SOO OOGAY
Posted by: toggaherer on: May 1, 2009
Waxa nasiibdarro ah in nin weyn oo haya xil qaran, waa walaalkay Jaamac Yaasiin Faarax, xoghayaha guud ee Xisbiga UDUB, uu u badheedho arrin iyo hadalo reeraysan, waxana hubaal ah in aanu keli ku ahayn.
Ugu horayn waxa aan doonayaa in aan u sheego dhamaanba shicibka Somaliland, gaar ahaan taageerayaasha, xubnaha iyo maamulka sare ee Xisbiga UDUB-ba in aanan waxba ka ogayn sheekada wargeysyada lagu soo qoray ee ku saabsan in aan la kulmay qaar ka mid ah madaxda dawladda Sh. Shariif.
Haa, waan la lee’ahay xidhiidh saaxiibtinimo, shaqo (danahayga Maraykanka) iyo weliba xidhiidh dhaqameedyo, sida guur, iwm qaar ka mid ah hogaamiyayaasha/ qabqablayaasha siyaasadaha Soomaaliya. Laakiin ma jirto cid aan anigu u metalay Somaliland amaba aan kala hadlay arrimaha Somaliland. Sida ay derajada xilka la ii magacaabay ay sheegayso waxa uu xidhiidhkaygu ku koobnaa oo keli ah arrimaha Xisbiga oo heer Maraykan aan dhaafsiisnayn. Inkasta oo ay taasu jirto ayaa haddana ay shaqsiyaad ku jira siyaasadda S/land u arkeen in dhaqdhaqaaqayga iyo wax qabadkaygu uu carqalad ku yahay danahooda siyaasadeed ee ku salaysan “isku dirka, kala dirka iyo u kala sheekaynta”. Haddaba si loo dhaawaco sumcadayda, naloogana dhex abuuro xurguf aniga iyo Maamulka sare ee dalka ayaa la soo maleegay arrintan masabidka ah, la iiguna badheedhay si aan gabasho lahayn.
Waxa aan qirayaa in weerarkan ay soo maleegeen, kana dambeeyeen qaar ku dhawdhaw xoghayaha guud ee xisbiga UDUB, lana kaashadeen shaqsiyaad cadaw ku ah jiritaanka iyo qaranimada S/land, isla markaana ay uga horayso danta gaarka ah iyo tan raasku.
Warka uu saxaafadda siiyay xoghaye guud, Mr. Jaamac, waxa uu sheegay in ay kala soo hadleen gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka saddex nin oo sheegay in uu Yuusuf u adeego danaha xisbi mucaaradka KULMIYE. Waxa nasiibdarro ah, isla markaana meel ka dhac ku ah kursiga uu ku fadhiyo ee ah “Xoghayaha Guud” in uu ka hor mariyo u dhego nuglaanta iyo adeecidda inamada yar yar ee reerkiisa ah. Saddexda nin ee uu sheegay xoghayuhu waxaa hormuud u ah wiil yar oo uu adeer u yahay oo da’diisu tahay 22 sanno, labada nin ee kalena waa niman muqayiliin ah oo iska daa xisbi’e naftoodii daayacay, kana can ah gobolkan Minnesota.
Anigu, Yuusuf ahaan, aniga oo ah Gudoomiyaha UDUB ee USA, kama amar qaato, kamana haybaysto shaqsiyaadka ay qaraabada yihiin madaxda dalka, kii uu doonaba ha ahaadee. Xil ayaa la’ii dhiibay, si sharci ah ayaana la iigu dhiibay, haddii aan gudan waayana si sharciga xisbiga waafaqsan ayaa la iiga qaadi karaa. Xidbiga UDUB, laantiisa USA waxaay leedahay “gole fulin” oo ka kooban 11 xubnood. Koob iyo tobankaas xubnood waxaa ka mid ah gudoomiyayaasha gobolada oo ay soo doorteen xubnaha UDUB ee gobolka ay madaxda ka yihiin. Intaas oo masuul ah, xoog iyo xiniinbana u huray horumarinta xisbiga waxa uu xoghayuhu kaga kalsoonaaday saddexda wiil ee uu adeerka u yahay, lana qaatay qorshihii la igu fashilin lahaa.
Waxa aan hubaa, cadaynayaana in ay maleegtan siyaasadeed, ee reeraysan uu ka raali ahaa, haddaanu isaguba abaabule ka ahayn walaalkay xoghaye guud Jaamac Yaasiin Faarax. Waxa taas cadayn u ah: Qof kasta oo dibadda uga metela xisbiga waxa kayaala xarunta dhexe ee xisbiga (Hargeysa) file ay ku qoran yihiin meelaha lagala xidhiidhi karo. Aniga gaar ahaan waxa uu xoghayuhu hayay, amaba heli karayayn tilifoonkayga gacanta (mobile) iyo tilifoonadayda guriga iyo shaqadaba. Waxa aanu xubno sarsare oo xisbiga amaba dawladda ku jira aanu si joogto ah ugu wada xidhiidhnaa e-mails. Markii sheekadan lasoo geshay internet-yada iyo joornaaladda haba yaraatee ma aanu xiisaynin in uu isoo raadiyo. Kaba sii darane ma aanu xiisayn in uu lasoo xidhiidho mid keli ah oo ka mid ah Gudoomiye goboleedyada xisbiga UDUB ee USA ama/iyo xubnaha kale ee guduga fulinta. Waxa muddo saacad ka yar gudeheed uu ku qabtay shir jaraa’id oo uu lacagtii xisbiga u qaybiyay si uu u bilaabo caydayda iyo aflagaadadayda. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in aan dambiile ahay, qarankana aan dembi weyn ka galay !!!. Xoghayuhu waxa uu tilifoon igula soo xidhiidhay kadib markii uu dhamaystay caydii iyo cambaarayntii uu ila rabay, uuna filayay in aan ahay tuke baal cad. Hadda sidee ayuu tilifoonkayga kusoo helay ee uu awal u waayay? Qaybo caydayda iyo af lagaadadayda ah waxa uu ilaa hadda kusii wadaa website-ka uu ka wadi jiray London, kahor inta aanu xoghayaha noqon, haddana uu ku wareejay wiil uu adeer u yahay oo degen London, UK. Fadlan ila fiiriya aflagaadada intaas leg: http://www.qarannews.com
Waxa aan lee’ahay anigu dembi ma aanan gelin, ee Mudane Jaamac adiga ayaa dembi weyn ka galay xisbiga iyo dalkaba. Ma ahi nin marti kaaga ah xisbiga, waanan kaa UDUB-sanahay, waanan kaa wadanisanahay, igumana afduubi kartid sheeko ay kuugu soo sheekeeyeen inamada aad adeerka u tahay. Waxaaan ahay masuul xisbi, waxana ina kala saaraya sharciga xisbiga. Waanan imanayaa Hargeysa haddii aan dambiile ahay si la’iiga jaro.
Waxa kale oo muhiim ah in aan halkan uga sheego shaqsiyaadka ila soo xidhiidhay ee ka socday xisbi mucaaradka KULMIYE, in aanan anigu meelna u socon, udubna aan ahay, ahaana doono aanana uga tegidoonin shaqsi shalay kusoo biiray xisbigan iyo niman caatifadaysan. Waxa aan u cadaynayaa dhamaanba dadweynaha ku hadla afka Soomaaliga in aanan Somaliland marnaba ku iibsanayn shilimaad iyo dano gaar ah. Waxa aan ahay nin AAMINSAN GOONI ISU TAAGA SOMALILAND, xisbiga keli ah ee aqoonsi caalami ah gaadhsiin garaana uu yahay UDUB, Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin-na uu yahay madaxweynaha ugu haboon hogaaminta dalka.
Nasiibdarrada UDUB waxay bilaabantay maalintii uu halyeygii weynaa ee Maxamed Ismaaciil Bulaale ka geeryooday UDUB, iyo markii dardaarankiisii dhaxal wareejinta la oofiyay ee lagu caleemo saaray walaalkay Jaamac. Waxa aan uga tacsiyadaynayaa dhamaanba umadda Somaliland iyo madaxweynaheena qaaliga ahba gefka iyo khilaaf raadinta uu xoghayaha guud ee xisbigu ula kacay xisbigii uu madaxda ka ahaa laftiisii. Waxa aan ka codsanayaa dhamaanba taageerayaasha xisbiga UDUB in aanay ka ficilqaadan xumaantan iyo qaybqaybintan uu xoghayuhu ku kacay. Xisbigu inaga ayuu inaga baaba’ayaa ee si gaar ah uma laha xoghayuhu, sidaas awgeed waxa aan ku adkaynayaa, kana baryayaa dhamaanba taageerayaasha xisbigu in aanay samayn arrimo ay si gaar ah ugaga faa’iidaysan karaan dadka neceb horumarka iyo sumcadda xisbigeena UDUB.
Gudoomiyaha UDUB ee USA